Goobaha Khadka Tooska ah ee Koonfur Afrika - Xeerarka Koodhadhka Khadka Tooska ah ee Khadka
(423 votes, celcelis ahaan, 5.00 out of 5)
Koonfur Afrika waa mid ka mid ah gobollada ugu soo jiidashada badan ee ka shaqeeya ciyaaraha khamaarka. Laakiin hadda khamaarka internetka ee waddanku aad ayuu u xadidan yahay, mar horena guud ahaanna la mamnuucay.
Topin casinos ee caanka ah ee 5 ee Koonfur Afrika
Ka mamnuucid adag, khamaaristu waxay ku dhacday 1992. Kaalinta kaliya ee warshadaha waxaa lagu xusay 1994, markii xukuumadda cusub ee Koonfur Afrika ay isbaddal ku samaysay sharciyada khamaarka, sharci-dejinta khamaarka ee casiinyada dhulka ku yaal, iyo sidoo kale ciyaaraha isboortiga iyo sharaf-ka-qaadista tartanka farqiga internetka. Wax-ka-beddelku wuxuu dhaqan galay oo keliya 1996.
Si kastaba ha ahaatee, maanta koonfurta Afrika waxay si xor ah uga ciyaari kartaa boggaga shisheeye ee casinos online, inkastoo xaqiiqda ah in loo aqoonsado sharci darro. Hay'ado badan oo internetka ah, inkastoo ay mamnuucayaan, waxay sii wadaan inay aqbalaan ciyaartoyda ka socota Koonfur Afrika, iyaga oo siinaya fursad ay uga ciyaaraan xulalka Koonfur Afrika (R).
Ka wada hadallada wax ka beddelka sharci dejinta heerarka dowladda Koonfur Afrika waa socotaa. Waxaa la filayaa in dhawaan casinos online weli la sharciyeeyo. Waxaa dhowaan lagu soo waramey in xukuumadda Jamhuuriyadda Koonfur Afrika ay ogolaatay in ay ku siiso liisanka 10 ee casinos online ah. Tani waxay noqon doontaa tallaabo muhiim u ah horumarinta warshadaha gobolka. Si kastaba ha noqotee, waqtigan xaadirka ah weli lama fulin.
Shirkadda Slotegrator, oo leh waayo-aragnimo balaadhan oo ah bixiyaha iyo la-taliyaha suuqa internetka ee khadka internetka, ayaa sameeyey sahan online ah oo ah goobaha ugu khamaarka lagu booqdo ee Koonfur Afrika. Iyadoo ku saleysan arimahaan, khubarada waxay sameeyeen qiimeyn ka mid ah 10 casuniyada online ee ugu caansan South African.
Liistada Liiska 10 South Africa Online Sites
Ganacsiga khamaarka ee Koonfur Afrika waa la oggol yahay ilaa 1994. Dhammaan noocyada khamaarka waa la sharciyeeyay, marka laga reebo qaybta internetka. Kaliya sharadka isboortiga iyo sharad ku tartanka fardaha ayaa loo oggol yahay khadka tooska ah. In ka badan 40 casinos ayaa ka shaqeeya Koonfur Afrika. Khamaarka ugu badan wuxuu ku yaal Johannesburg, gobolka Gauteng. Waxaa jira 4 casinos weyn, oo dhammaantood wadajira in kabadan 180 miis oo loogu talagalay ciyaaraha kaararka, in kabadan 5,200 mashiinada ciyaarta iyo turubka fiidiyowga.
Source of Photo: Wararka Khamaarka
Khamaarka ugu weyn ee GrandWest Casino & World Entertainment wuxuu ku yaal Cape Town. Waxaa jira 79 miis oo loogu talagalay cayaaraha, 10 miisas turub, in ka badan 2500 mishiinnada ciyaarta iyo kaararka fiidiyowga.
Magacyada ugu caansan ee casinos South Africa:
Tsogo Sun wuxuu haystaa liisanka 14;
Sun International - shatiyada 13;
Peermont Global - ruqsadaha 8;
Naadiyada London International - 1 liisanka;
Garoonka Casri Casino;
Dakhliga ka soo gala khamaarka ee Koonfur Afrika wali qiyaastii waa isku mid oo waxaa lagu cabiraa balaayiin lacag ah South Afrika. Dakhliga guud 2015-2016 dakhliga guud ee ganacsiga khamaarka sharciga wuxuu gaarayaa ZAR 26.3 bilyan ama USD 1.86 bilyan. Dakhliga ugu badan waxaa keena casino - 70.5% ee dakhliga guud.
Isla mar ahaantaana, inta badan ciyaartoydu waxay ka qayb qaataan bakhtiyaanasiibka qaranka - 78.9%. Kaliya 10.6% ayaa ka ciyaara qamaarka. Saddex meelood saddex meel dadka ayaa waligood ka qayb qaatay khamaar kasta. In ka badan kalabar dadka degan waxay tixgeliyaan casinos ama khamaaristu waa hab ku habboon oo loo abaabulo xilliyada firaaqada.
Sharax kooban oo ku saabsan Koonfur Afrika
Koonfur Afrika waa Jamhuuriyadda Koonfur Afrika, waa jamhuuriyad baarlamaan oo ku taal koonfurta Afrika. Tani waa waddanka ugu horumarsan qaaradda waana waddanka kaliya ee Afrika ee ku yaal G20 ("Labaatankii Weyn").
Wadanku wuxuu aqoonsan yahay 11 luqadood oo dowladeed, wuxuu leeyahay dad badan oo cadaan, Aasiya iyo madow. Kii ugu horreeyay ee gumeysta Nederland 1652. Koonfur Afrika waxay leedahay taariikh soo jireen ah - qarnigii 19aad dagaalladii Anglo-Boer waxaa loogu dagaalamay dheeman iyo dahab, qarnigii 20aad waxaa jiray midab takoor dheer. Waxaas oo dhami waxay ka tageen raad ku saabsan shuruudaha horumarinta ganacsiga, dhaqaalaha, iyo bulshada.
Lacagtu waa lacagta Koonfur Afrika, oo lagu diidayo ZAR ama R. Xaddiga bisha Diseembar 2016 waa USD 0.0709 oo loogu talagalay ZAR 1 ama ZAR 14.1 oo loogu talagalay USD 1.
Dalku wuxuu inta badan dhoofiyaa dheeman, dahab, platinum, mashiinno iyo qalab. Soo dejin - saliid iyo alaabooyin. Koonfur Afrika waxay kujirtaa 39th qiimeynta wadamada ay kufiican tahay in laga sameeyo ganacsi.
Taariikhda khamaarka ee Koonfur Afrika
Ganacsiga khamaarka ee Koonfur Afrika waa la mamnuucay illaa 1994. Sharciga, oo loogu magac daray Sharciga Khamaarka ee Koonfur Afrika, oo la qaatay 1965, ayaa mamnuucay dhammaan noocyada khamaarka, marka laga reebo tartamada fardaha. Waxaa loo aqoonsaday isboorti.
Kasiinooyinka sharci darrada ah waxay bilaabeen inay horumariyaan illaa dhammaadkii 1970-yadii. Waxay ka shaqeeyeen bantustans Boputatsvan, Siskey, Transkei, Venda.
Bantustans - waa dhacdo gaar ah taariikhda Koonfur Afrika. Waxay xoogaa la mid yihiin boos celiska Mareykanka, laakiin waxay leeyihiin astaamo u gaar ah. Tani waa dhulkii loo isticmaali jiray boos celinta dadka madow ee asal ahaan ka soo jeeda Koonfur Afrika. Qaar ka mid ah bantustansku waxay heleen xornimo, tanina waxay suurto gelisay in la abaabulo ganacsi khamaar. Tusaale ahaan, Bophuthatswane wuxuu ka dhisay magaalada-casino Sun City.
Kaliya qowmiyadaha Koonfur Afrika ayaa ku noolaan kara bantustans, muwaadiniinta badankoodna sharci ahaan kuma soo geli karin hay'adahaas. Si kastaba ha noqotee, illaa 1995 waxaa jiray qiyaastii 2000 casinos.
Markii midab-kala-sooca uu dhammaaday 1994, iyo dowlad dimoqraadi ah ay xukunka qabsatay, dhammaan noocyada khamaarka waa la xalliyay. Sharciga Khamaarka Qaranka, oo la soo saaray 1996, wuxuu oggolaaday nidaamka shatiyeynta casino iyo bakhtiyaanasiibka gobolka. Tartanka fardaha ayaa markale loo aqoonsaday nooc khamaaris ah.
Sharciyada khamaarka ee Koonfur Afrika
Xadka da'da ciyaaryahanka South Africa waa 18 sano. Carruurta yaryari xaq uma laha inay ka ciyaaraan goobaha khamaarka lagu ciyaaro.
Waxaa jira saddex ficil oo qeexaya qaab-dhismeedka sharci ee khamaarka ee Koonfur Afrika:
Xeerka Khamaarista Qaranka ee 1996;
Sharciga Khamaarka Qaranka 2004 - oo lagu kabayo kii hore;
Sharciga Wax Ka Beddelista Qareenka Qaranka 2008, oo go'aamiya booska ganacsiga khamaarka internetka.
Sharciga Qamaarka Qaranka ee 1996 wuxuu si cad u qeexayaa sida shatiyada casino loo qaybiyo inta u dhexeysa gobollada dalka. Wadarta liisanka waa 40 gogo '. Waxaa loo qaybiyaa sidan soo socota:
Gobolka Western-Cape (xarunta - Cape Town) - shatiyada 5;
Gobolka Waqooyiga-Cape (Kimberley) - 3;
Gobolka Bariga-Cape (Bisho) - 5;
Gobol Bilaash ah (Bloemfontein) - 4;
Gobolka Waqooyi-Galbeed (Mafeking) - 5 shati;
Limpopo ama Gobolka Woqooyiga (Polokwane) - 3 shati.
Marka la eego ficil la mid ah, hay'ad (urur ama qof) ma laha xuquuqda haysta liisamada casriga ah ee 16 ee dalka oo idil ama ka badan 2 ruqsadaha gobol gobol kale.
Xeerka Khamaarista Qaranka wuxuu qeexayaa:
waxa loo tixgelinayo khamaar;
habka shaqada ee Guddiga Qaranka ee Khamaarista.
Xeerarka khamaarka ee Koonfur Afrika
Guddiga Khamaarka Qaranka - maamulka gobolka khamaarka ee Koonfur Afrika. Waajibaadka kormeeraha waxaa ka mid ah:
qeexaan xeerarka ganacsiga khamaarka ku shaqeeya;
masuul ka ah in si haboon loo isticmaalo khamaarka.
The Xafiiska Koonfur Afrika ee Heerarka wuxuu mas'uul ka yahay istaandarka, tijaabinta, falanqaynta, qiyaasidda iyo shahaadada mashiinka cayaaraha, nidaamka kormeerka elektaroonigga ah iyo qalabka kale ee casino.
Association of Casino ee Koonfur Afrika
Waxaa jira ciyaaryahan kale oo ku jira ganacsiga khamaarka ee Koonfur Afrika - Casino Association of South Africa (CASA). Ururka waxaa la aasaasay 2003. Hawlaha muhiimka ah ee ururka:
Isku duubo shirkadaha xawaaladaha iyo saamileyda;
Inay bixiyaan macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan khadka casaan dadweynaha;
si loo helo faham weyn iyo daahfurnaanta ganacsiga khamaarka.
Ururku wuxuu mideeyay ku dhowaad dhammaan casinos-yada dalka. Wakiillada dowladda lafteeda ayaa haya 37% saamiyada kaararka kala duwan ee ku saleysan dhulka. Xubnaha ururka waxay bixiyaan in kabadan 100,000 oo shaqo.
Sharciyada khamaarka internetka ee South Africa
Sharciga Wax-ka-beddelka Khamaarka Qaranka ee 2008, oo illaa hadda aan la dhammaystirin, wuxuu aqoonsan yahay ganacsiga khamaarka qadka ee Koonfur Afrika inay qayb ahaan tahay sharci-darro. Sidoo kale waa sharci darro urur ahaan khamaarka internetka, iyo kaqeybgalka iyaga. Qayb ahaan - maxaa yeelay dhammaan noocyada khamaarka khadka tooska ah lama mamnuuco.
Sharciga ayaa mamnuucaya waxa loogu yeero “ciyaaraha is-dhexgalka”:
La ogol yahay:
online-ka ciyaaraha isboortiga;
Sharaxaadda farqiga farasiga ah ee internetka;
iyo guud ahaan ganacsiga dadka sameeya buugta. Caadi ahaan, qabanqaabiyaha BC waa inuu shati ka haystaa dowladda.
Mawduuc kasta, ha ahaato abaabulaha barta internetka ama bangiga dhaqdhaqaaqa u leh khamaarka internetka, waxaa lagu ciqaabi doonaa ganaax lacageed oo ah R 10 million (USD 709 kun) iyo / ama 10 sanado xabsi ah.
Si kastaba ha noqotee, sharciga ma qeexayo ciqaabta shaqsiyaadka ciyaartoyga ah. Laga soo bilaabo tan waxay raacaysaa in ciyaartoydu ay ka ciyaari karaan khamaarka, kuwaas oo adeegyadooda dibedda la dhigayo.
Noocyada khamaarka ee Koonfur Afrika
Guddiga Qaranka ee Khamaarista ayaa sameynaya qeexitaanka soo socda ee khamaarka:
casino - ciyaaraha guddiga iyo boosaska;
qiimaha fuushanka iyo isboortiska, kuwaas oo lagu bixiyo baqshiishayaasha iyo cawska;
mashiino leh shuruudo xadidan iyo abaalmarin - Lacagta Lacagta Lacag bixinta Lamped (LPM);
Biyo-dhaqameedka iyo mashiinnada elektarooniga ah (Meelaha Baagagga ee Baayirada, EBT).
Casinos South Africa waxay bixisaa ciyaaro badan oo kaararka ah, gaar ahaan kuwa aan Yurub ahayn, laakiin sidoo kale qaarada Koonfur Afrika.
Tusaale ahaan, Cape Town ciyaarta aadka loo jecel yahay waa klawerjas (klawerjas) - ciyaar duug ah oo Dutch ah oo laaluush lagu qaato, weli waa caan Nederland. Hadafku waa ururinta tirada ugu badan ee laaluushka.
Ciyaarta Kaluka (kalookie) - nooc rummy ah. Hadafku waa in la waco isku-darka qaarkood.
Thuni (Thuni ama Thunee) waa ciyaar caan ku ah Koonfur Afrika. Asal ahaan, waxay caan ku tahay Aasiyaanka. Xeerarka ciyaarta ayaa sidoo kale kaa raba inaad keento tiro cayiman oo dhibco ah.
Ciyaaro dheeri ah oo caan ku ah Koonfur Afrika:
qashinka waa kaararka Ingiriisiga;
canasta (canasta) - nooc ka mid ah rhammi;
samba (samba) - nooc ka mid ah kanaalka;
skat (skat) - ciyaar laaluush ah oo ka timid Jarmalka;
bisadaha iyo jiirka (nacasta iyo xumaanta) - nooc ka mid ah duufaanta tartame;
shithead (shithead) - ciyaarta luminta dhammaan kaararka.
Dakhli ka yimid ganacsiga khamaarka ee Koonfur Afrika
Dakhliga guud ee 2015-2016 maaliyadeed ee ganacsiga qamaarka ganacsigu wuxuu ku salaysan yahay ZAR 26.3 ama bilyan USD 1.86.
Dakhliga ugu badan waxaa keena casino - 70.5% dakhliga guud ama USD 1.3 bilyan;
iyaga ka dib waxaa jira qiimayaal - 16.9% ama USD 315 million;
ka dibna LPM (Mashiinnada Lacag-bixinta Xaddidan, mashiinnada leh lacag-bixinno xadidan) - 9.0% ama USD 167 milyan;
booska afraad ee bingo - 3.6% ee dakhliga guud ama USD 66 milyan.
Gobollada ayaa soo gala dakhliyada guud ee ka yimaada khamaarka:
Warshadaha khamaarka ee gobolka Gauteng wuxuu kasbadaa inta ugu badan - 40% ama USD 745 milyan miisaaniyadda 2015-2016;
meesha labaad waxay ku taala gobolka Western-Cape -15.6% ama USD 291 USD;
kaalinta saddexaad waxaa qaata KwaZulu-Natal - 18.5% ama USD 344 milyan.
Gauteng wuxuu soo saaraa dakhliga guud ee ugu sarreeya ee casinos, saamiyada iyo bingo. Dakhliga ugu badan ee qaybta LPM waxaa helay gobolka Western-Cape - 30%.
Tirada mashiinnada lagu ciyaaro ee kaararka dhulka ku yaal ee Koonfur Afrika ee 2015 waxay ahaayeen 23,415. Dakhliyada boosaska - USD 969 milyan
Tirada miisaska sanadkii 2015 ee dhammaan casinos-ka dalka wuxuu ahaa 932 gogo '. Dakhliga iyaga ka soo gala waa 237 milyan oo doollar.
Canshuurta khamaarka ee Koonfur Afrika
Ka goynta miisaaniyada dalka ayaa sidoo kale lagu qiyaasaa malaayiin doolar. Sannadkii 2015, mas'uuliyiinta Koonfur Afrika waxay ka heleen $ 262 milyan ganacsiga khamaarka. Tani waxay ka dhigan tahay 28% dakhliga guud ee xarumaha khamaarka.
Canshuurta laga jarayo waxaa ka mid ah saddex nooc oo lacag ah:
Canshuurta shirkadaha waxaa laga ururiyaa shirkadaha. Qiimaheedu wuxuu ku saleysan yahay dakhliga shirkadda;
cashuurta khamaarka - waxaa laga soo ururiyaa dadka shatiga haysta maamulka gobolka. Qiimaha waxaa loo xisaabiyaa iyadoo loo eegayo dakhliga guud ee rukhsadaha;
canshuurta qiimaha lagu daro - waxaa loo xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo qiimaha lagu daro marxalad kasta oo wax soo saar iyo isdhaafsi ah badeecadaha iyo adeegyada. Waxaa sidoo kale lagu soo oogay casino, maahan ciyaartoyda.
Ganacsiga khamaarka internetka ee Koonfurta Afrika
In kasta oo xaqiiqda ah in khamaarka khadka tooska ah ee Koonfur Afrika la mamnuucay, ciyaartoyda oo dhan naftooda ayaa awood u leh inay adeegsadaan adeegyada casinos-yada caalamiga ah. Ciyaartoydu waxay maalgashan karaan lacagta maxalliga ah, taas oo fududeyneysa adeegga. Laakiin waxaa jira hal nuxur: laga bilaabo Oktoobar 4, 2016, mas'uuliyiintu way la wareegi karaan guuleysiga ciyaartoyda khadka tooska ah. Waaxda Ganacsiga iyo Warshadaha ayaa daabacday wax ka badal cusub oo lagu sameeyay Hindise Sharciyeedka Waxka badalka Qamaarka, sida ku cad, maxkamada waxay xaq u leedahay inay la wareegto oo ay xirto guulaha ciyaartooyda.
Markaa, waxaad ka ciyaari kartaa khadka tooska ah - laakiin maaha xaqiiqda ah inaad heli karto guulahaaga, maxaa yeelay xitaa macaamillada waddanka gudihiisa waa mamnuuc.
Xadhiga casabada internetka
Ciyaaraha casino ee khadka tooska ah, bingo iyo bakhtiyaanasiibka aan sharciyeysnayn ayaa la mamnuucay sanadkii 2010, markii maxkamadda gobolka Gauteng laga mamnuucay qadka tooska ah ee loo yaqaan 'Swaziland based Pigg Peak'. Horudhac ayaa la abuuray, tan iyo markaasna dhammaan casinos-yada internetka ee gudaha ayaa gebi ahaanba la mamnuucay.
Kaliya saddex nooc oo khamaar online ah waa sharci:
barta internetka ee bakhtiyaanasiibka qaranka;
Sharaxaadda farqiga faraska.
Wax kasta oo kale waxaa lagu daraa waxa loogu yeero "suuqa cirro". Waa la arki doonaa haddii dowladdu ay sii wadi doonto tixgelinta sharciyeynta ganacsiga qadka ama in kale.
Bill Qalab Qaadashada Lahaanshaha
Muddo ka dib, biilka Sharciga Khamaarista Khariidadda, oo sharci ka dhigaya khamaarka internetka ee Koonfurta Afrika, ayaa laga wada hadlay.
Biilka Bixinta Khamaarista Khadka Leh:
cadadka abaalmarinta iyo abaalmarinta;
masuuliyada gobolada iyo Guddiga Qaranka;
Heerarka loogu talagalay qalabka casabiga onlineka;
arrimaha ilaalinta xuquuqda ciyaartoyda.
Sharciga, tusaale ahaan, wuxuu soo qoray xadadka soo socda:
mamnuucista ciyaaraha caruurta;
mamnuucista amaahda ciyaartoyda;
xaddidan xayeysiisyada xayaysiisyada iyo dallacsiinta casino online.
Bishii Maajo 2016 mashruucan waxaa laga mamnuucay Khariidadda Khamaarista.
Wakiilo ka socda Waaxda Ganacsiga iyo Warshadaha, oo sidoo kale ka shaqeeya warshadaha madadaalada, waxay aaminsan yihiin in biilku uu ku foogan yahay dhibaatooyinka bulsheed ee la xiriira khamaarka internetka.
Marka biilka la tixgeliyo May 27, 2016, xubin ka tirsan Xisbiga Qaranka Qaranka Shaik Emam (Shaik Emam) ayaa ku dooday in ay diideen in ay aqbalaan sharciga:
Xirfadaha dadka caadiga ah waa la burburiyey maxaa yeelay waxay u oggolaanayaan silsilado caddaan ah inay daboolaan khasaarahooda iyaga oo kharashkooda bixinaya.
Kuwani waa dareenka guud ee dawladda. Xaqiiqdii, waxaa jira olole xoogaa adag oo ka socda casinos-ka dhulka ku saleysan oo aan jeclayn xaqiiqda ah in degellada websaydhadu ka qaataan ka-qaybgalayaal badan. Kuwa ka soo horjeeda biilka ayaa loo fiirsadaa, tusaale ahaan, ganacsiga khadka tooska ah ee Yurub: shabakadaha waxaa soo xulay ku dhowaad 20% booqdayaasha casinos-ka khadka tooska ah.
Taageeraha biilka iyo wakiilka Isbahaysiga Dimuqraadiga, Geert Hill-Lewis (Geert Hill-Lewis) ayaa ka fakaraya qaladkan:
“Qawaaniinta warshadaha ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu ilaaliyo shacabka. Xeerka Waxka Beddelka Khamaarka Qaranka ee 2008 lama aqbalin illaa hadda. Tan awgeed, khamaarka khadka tooska ah waxaa ku dhaca jahwareer. ”
Taageerayaasha sharciyeynta hogaaminta ganacsiga internetka iyo dooda noocan oo kale ah: dowladda ayaa lumisay malaayiin lacag, ma sharciyeynayso web-casino. Ururka Kasiinooyinka ee Koonfur Afrika (Casino Association of SA) wuxuu sheegayaa tirooyinkaas:
“Wadanku wuxuu lumiyay qiyaastii ZAR 110 milyan (USD 7.8 milyan) oo ku saabsan casinos sharci darrada ah ee internetka. Isla mar ahaantaana, siyaasadda gardarrada ah ee casinos-ka khadka tooska ah waxay ka dhigeysaa hay'adaha dhulka lacag lumiyaan. Faa’iidada macaashku waxay hoos ugu dhacday 0.6%. ”
Waqtigan xaadirka ah, arinta ganacsiga internetka wali lama xalin. ”
Khadka ugu fiican ee internetka loogu talagalay Koonfur Afrika
Hoos waxaa ku qoran liiska casiinooyinka online-ka ah ee interface ay u oggolaanayso dadka reer Koonfur Afrika inay ku ciyaaraan dhamaan sifooyinka:
Casriyeynta Las Vegas;
Mashiinnada moobiilka ee ku yaala casinos South Africa
Casinos South Africa waxay bixisaa goobo fiidiyoow ah oo fiidiyoow ah oo ku yaalla goobaha internetka:
Qof walba Jaaniskiisa;
Sida laga soo xigtay Guddiga Qaranka ee Qamaarka Qaranka ee 2016, 15.3% guud ee dadweynaha ayaa si joogto ah u khamaaraya.
Muddo shan sano ah waxyar baa ka yaraaday tirada ciyaartoydii ku jirtay khamaarka, bingo, sharadka iyo qaybta LPM. Laakiin iibsiga tikidhada bakhtiyaanasiibka gobolka ayaa kordhay.
Tusaale ahaan, Abriil 2015, tirooyinka soo socda ayaa la arkay:
78.9% ciyaartoyda waxay iibsadaan tigidhada bakhtiyaanasiibka;
11.2% ayaa leh kaararka xoqida;
10.6% - khamaarka;
7.1% - bakhtiyaa-nasiibka gaarka loo leeyahay;
6.2% - tartanka fardaha iyo sharadka ciyaaraha;
17.5% waxay ku hawlan yihiin khamaarka sharci-darrada ah.
Ciyaaraha khamaarka sharci darrada ah waxaa laga aqoonsan yahay hay'adaha aan shatiga lahayn iyo casinos-ka internetka. Waa in la ogaadaa in dhowrkii sano ee la soo dhaafay ay yaraadeen tirada ka qaybgalayaasha khamaarka sharci darrada ah. Bishii Nofeembar 2012, 41% ciyaartoydu waxay ku ciyaareen si sharci darro ah. Hadda 2015-2016 - kaliya 17.5%.
Khamaarka waxaa loo aqoonsan yahay kaliya 9.9% tirada guud ee ciyaartoyda. Madow badan ayaa bilaabay inuu ciyaaro -19.8% 2015-2016. Tirada ciyaartooyda, oo da'dooda laga bilaabo 25 sano, ayaa sii kordheysa.
Maaha hawl fudud in la doorto khamaarka khadka tooska ah ee Australiya laga helo. Waqtigaan la joogo hormuudkayaasha software-ka khamaarka internetka ee hormuudka u ah waxay yimaadeen suuqa dalkan cajiibka ah tartanka ka socda garoonka wuxuu runtii noqday mid si xoog leh u socda. Taasi waa sababta aan ugu isticmaalnay saacado badan ciyaarista blackjack, roulette, pokies internetka, khamaarka fiidiyowga, ciyaaraha ciyaarta iyo cayaaraha kale ee khamaarayaashu badanaa ku doortaan khamaarro kaladuwan ciyaartoy Australiyaanka ah. Markaa waxaan u sheegi karnaa waxa aan ku jeclahay iyo waxa aan ku necebnahay bog kasta oo khaas ah oo toos ah goobta 'AU' waxaanan hadda talo ka heli karnaa sida ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'casino' online casino 'ee salka ku haya xaqiiqooyinka aan hayno.
Best casino online Australia ayaa dalab
Markii aan go'aansaday in la helo casino ugu fiican online Australia ayaa dalab aan kaliya doonayay inuu badbaadiyo markii ciyaartoyda. Sidaas daraaddeed in visitors of our site ma u baahan tahay in ay sii raadinaya site casino AU online in iyaga habboon ugu, laakiin ka dooro mid ka our liiska halkii iyo bilaabaan ku riyaaqayaa ah kulan weyn isla markiiba. Oo in kastoo hawsha aan ahaa mid ka mid sahlan, waxaan u doortay dhowr casinos ku haboon shuruudaha ugu.
Shuruudaha aan isticmaalo ma ay aad u adag. First of dhan waxaan ku bixisay in ay tayada iyo tirada kulan casino kasta online ciyaartoyda Australia waxay leedahay fiiro dhow. The kala duwanaanta ka badan boosaska, roulette, blackjack, video turub, pokies online, iyo ciyaaraha kale casino fiican.
Markaas, waxaa kale oo jira gunno ah. Waxaa dhab ah arrimaha sida badan waa kuwan oo waa wixii qadar. The gunooyinka soo dhaweyn waa waxa ciyaartoyda sida caadiga ah aad u hesho markii ugu horeysay soo biiray casino internetka ah oo ay tahay gunno muhiim ah si hubaal ah. Laakiin waa in aanay noqon mid ka mid ah oo kaliya soo jiidasho iyo sidoo. Dhammaan noocyada kale ee gunno u baahan tahay in la tixgeliyo. Oo tan iyo dallacsiinta ayaa sidoo kale kaa caawin karaan in kor bankrolls ciyaartoyda 'waxaan ka hubisay waxa ay yihiin iyo haddii ay waxaa lagu hayaa si joogta ah. waqti No more lumin
Baahnayn in la sheego in mid ka mid ah waxyaalaha ugu muhiimsan ee ciyaaryahan walba waa sida ay u fududahay waa in lacagta ku kasiino ah iyo in ay ka baxaan lacagta ka. fursadaha bangiyada waa in uu kala duwan oo ku haboon ee soo booqda goobta a wanaagsan online casino. Oo marka ay timaado casinos online ciyaartoyda ka Australia iyo New Zealand waa in ay leeyihiin mid aad u caan ah Poli e-jeebka la kaararka debit ka wada, kaararka deynta ay xal lacagta online liiska. Plus, ammaanka dhammaan xawaalad bangiyada ay tahay in la mudnaanta koowaad ee casino online aad doorato.
All oo dhan aan halkaan ku heysano liiska casinos top fiican online ciyaartoyda Australia. Haddaba sidaas daraaddeed waxaa jiri doona uma baahna inaad waqti ku qaataan ka eegay internetka ee goobaha casino ugu wanaagsan, tan aad ka qaadan kartaa mid ka mid ah kuwa aan bixino iyo waqti halkii ciyaaro aad ugu jeceshahay. Si aad u baadhaan xitaa more haboon adiga waayo, waannu ku kala casinos galay qaybaha ay ka mid yihiin, tusaale ahaan kuwa la lacagihii ugu weyn, kuwa bixiya doorashada ubalaadhan of pokies online iyo wixii la mid ah.
Isticmaalka talooyin waxaan leenahay at our site aad awoodaan si ay u bilaabaan bixinta iyo guusha daqiiqo gudahood noqon doonaa. Oo tan iyo casinos ugu qoran waxay bixiyaan versions of kulan ah loo habeeyey qalabka Android iyo sidoo kale for iPhone iyo iPad kulamada la ciyaari karaan waqti kasta iyo meel kasta inta aad ku leedahay xiriir internet.
0.1 Liistada Liiska 10 South Africa Online Sites
2.1 Sharax kooban oo ku saabsan Koonfur Afrika
2.2 Taariikhda khamaarka ee Koonfur Afrika
2.3 Sharciyada khamaarka ee Koonfur Afrika
2.4 Xeerarka khamaarka ee Koonfur Afrika
2.5 Association of Casino ee Koonfur Afrika
2.6 Sharciyada khamaarka internetka ee South Africa
2.7 Noocyada khamaarka ee Koonfur Afrika
2.8 Dakhli ka yimid ganacsiga khamaarka ee Koonfur Afrika
2.9 Canshuurta khamaarka ee Koonfur Afrika
2.10 Ganacsiga khamaarka internetka ee Koonfurta Afrika
2.10.1 Xadhiga casabada internetka
2.11 Bill Qalab Qaadashada Lahaanshaha
2.11.1 Khadka ugu fiican ee internetka loogu talagalay Koonfur Afrika
2.11.2 Mashiinnada moobiilka ee ku yaala casinos South Africa
2.12 Noocyada khamaarka ee Koonfur Afrika
2.13 casino Online Australia
2.14 Best casino online Australia ayaa dalab
nasiibka nasiib creek casino khamaarka